Jery taratra… herinandro: mbola mafimafy amin’ny vahoaka… | NewsMada
Jery taratra… herinandro: mbola mafimafy amin’ny vahoaka…
Nilaza ny Ceni fa nahitana 2, 53 % ny taham-pisoratana anarana amin’ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy, hifarana tanteraka ny 15 mey ho avy izao. Tafakatra 10 154 639 ireo voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana ankehitriny, raha 9 903 915 izany teo aloha.
Vao 28 ireo antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho solombavambahoaka, araka ny tatitry ny Ceni, ny 7 marsa lasa teo. Amin’izany, tsy azo atao mihoatra ny dimy andro na herinandro ny fanalavana izany fe-potoana izany, hifarana 12 marsa, raha mieritreritra hanao izany ny governemanta.
Misy milaza fa noho ny tsy fitovian-kevitra eo anivon’ny antoko politika sasany amin’ny fanolorana izay ho kandidà solombavambahoaka no anisan’ny antony mampihisatra ny fanaterana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina fa tsy noho ny anto-bola 5 tapitrisa Ar loatra.
Nilaza ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy fa averina amin’ny fitondrana ny tanim-panjakana rehetra nisy nividy. Tsy eto Antananarivo ihany izany fa manerana ny Nosy, misy mividy 3 Ar hatramin’ny 50 Ar ny metatra tsimivadimandry.
Nanao famindram-pahefana ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). Nilaza ny filoha vaovao, i Clément Jaona, fa olana ny fiheverana izay manao fitakiana sendikaly ho mpikomy fa tsy olom-pirenena. Mahatonga fitokonana ny tsy fitanan’ny tomponandraikitra ny teny nomeny.
Nisy ary hoe mbola hitohy ny fitokonan’ny sendikàn’ny Jirama, nitaky ny fialan’ny ny tale jeneraly, ny famerenana ireo mpiasa nitarika sendikà noroahina… Nitokona koa ny mpianatry ny oniversite, Antananarivo, mitaky ny amin’ny vatsim-pianarana, ny rafi-pampianarana LMD…
Tany Mahajanga ny nankalazana tamin’ny fomba ofisialy ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy, nanomboka ny 7 marsa, nibanjinana ny lohahevitra hoe: ”Zo sy andraikitry ny vehivavy eo amin’ny fampandrosoana”. Nitarika izany ny vadin’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Mialy.
Amin’izany, mbola mafimafy ho an’ny vahoaka ifotony ny tsy fandriampahalemana, ny vidim-piainana, ny halatra tany… Mandra-pahoviana?